Faaiidooyinka filfisha - Cilmi baadhis - Caafimaad tips
Home / Daawo dhireed / Faaiidooyinka filfisha - Cilmi baadhis
Faaiidooyinka filfisha - Cilmi baadhis
Admin March 25, 2020 Daawo dhireed
Waa maxay filfisha ?
Filfisha waa midha geedka filfisha oo ka soo jeeda qoys dhireedka loo yaqaano piperaceae waxaana loo isticmaalaa in cuntada lagu carfiyo iyo daawo ahaan labadaba waxaana laga helaa oo ku jira maadada loo yaqaano piperine oo ah waxa kulaylka u yeelaaya.
Faaiidooyinka caafimaad ee filfisha
Filfilsha badanaa waxaa loogu yeedhaa boqorada xawaashyada maadaama udgoon iyo caraf iyo dhadhan ay kulansatay sida darteed waxyar oo lagu filfil ah cuntada lagu darsado ayaa ka saamayn badnaan karta dhawaan xawaashyada kale ee cuntada dhadhan loogu yeelo hadaba filfisha waxay leedahay faaiidooyin caafimaad oo layaab badan.
Dheefshiidka: filfisha waxay wanaajisaa dheefshiidka sidaa darteed cunista filfisha waxay kordhisaa dheecaanka acid secretion ee caloosha taasina waxay keentaa in la fududeeyo dheefshiidka.
Miisaan dhimis : filfishu waxay jidhka ka caawinaysaa miisaan dhimis waayo waxay gubtaa unugyada baruurta sidaa daraadeed cuntooyinka kulkulul ee filfishu ka mid tahay waxay qofka ka caawiyaan inuu miisaanka si dabiici ah u dhimo.
Maqaarka: Filfishu waxay daryeesha maqaarka jidhka waxayna gacan ka gaysataa inay ka hortagto cudurka baraska kaas oo ah cudur lumiya midabka meelaha qaarkood oo ka mida jidhka ama maqaarka isla markaana ka yeela meelo midabku ka guuro oo cadaada.
Akhriso waxtarka xulbada
Akhriso waxtarka sanjabiisha
Akhriso waxtarka midhaha saytuunka
Sida laga soo xigtay cilmi baarayaal ka tirsan jaamacada Oregon health and science university maadada piperine ee ku jirta filfisha waxay awoodaa inay tayaynta maqaarka si ay u soo saarto midabka.
Neefta : filfisha waxay ka hortagtaa neefta sidaa darteed xaaladaha caafimaad daro qaarkood filfisha ayaa lagu amaanaa inay ka hortagto isla markaana daawo u tahay neefta taasna waxaa ugu wacan awooda uu alle ku abuuray iyo waxtarka filfisha
filfisha iyo galmada: Sida laga ay tilmaameen daraasadaha qaarkood filfisha waxay kordhisaa qulqulka dhiiga ee xubnaha galmada siilka iyo guska labadaba sidaas darteed filfisha waxay daawo ka tahay ciladaha iyo daciifnimada galmada.
Filfisha iyo uurka : filfisha waa caadi markii afka laga qaadanaayo qadarka ugu yar ama cuntada lagu daro xadiga ugu yar laakiin waa khatar hadii la isku badiyo waxayna sababtaa abortion ilmaha caloosha ku jira oo soo dhaca .
Faaiidooyinka kale ee filfisha
Filfisha waxay leedahay awood heersare oo bakteeriyada kula dagaalanto
Filfisha waxay kaloo wax ka qabataa cidhiidhiga sanqada ilaa dhuunta